ဂိမ်းထိန်းချုပ်ကိရိယာကို Google TV သို့မဟုတ် Android TV နှင့် မည်သို့တွဲချိတ်ရမည်နည်း။
Smart TV သည် YouTube နှင့် Netflix အတွက်သာ မဟုတ်ပါ။သင့်တွင် ဂိမ်းထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုရှိပါက၊ ၎င်းကို သင်၏ Google TV သို့မဟုတ် Android TV စက်ပစ္စည်းသို့ ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ဘယ်လိုပြောမလဲ။Google TV နှင့် Android TV သည် built-in ဂိမ်းထိန်းချုပ်ကိရိယာများစွာကို ပံ့ပိုးပေးသည်။သင့်တွင် Bluetooth wireless controller တစ်ခုရှိလျှင် ၎င်းသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်...
DOSLY PS4 ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာ
[အသုံးပြုနိုင်သောပလပ်ဖောင်း] PS-4 ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် PS-4/Pro/Slim/PC တို့နှင့် အပြည့်အဝ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။[2021 ဗားရှင်း] ဘက်ထရီပမာဏကို 1000mAh သို့ အဆင့်မြှင့်ထားပြီး ထိန်းချုပ်မှုအကွာအဝေးသည် 32 ပေအထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။Dual vibration motors၊ joysticks၊ touch screen၊ button feel, sound effects နှင့် sensitivity အားလုံးပါဝင်သည်...
နိုးထခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ပြောင်းပါ။
စိတ်ကြိုက်ခလုတ်လှုပ်ရှားနိုင်သော တာဘိုတုန်ခါမှု RGB အလင်း၊ NINTENDO SWITCH/SWITCH LITE/PC ဂိမ်းများအတွက် ကြိုးမဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာ 1. [2021 Switch Wireless Controller] ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် Switch/Switch lite/PC နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်၊၊ မိသားစု အီး...
၎င်းသည် နိုးထသည့်လုပ်ဆောင်ချက်၊ နားကြပ်ပေါက်၊ AUTO-FIRE TURBO၊ လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှု၊ ချိန်ညှိနိုင်သော တုန်ခါမှုစသည်ဖြင့်၊ ချယ်ရီပန်းရောင်ပါရှိသော MYTRIX ကြိုးမဲ့ PRO ထိန်းချုပ်ကိရိယာဖြစ်သည်။1. [ကြိုးမဲ့ခလုတ်နှင့် နားကြပ်ပေါက်နှင့် ကျောင်းလက်ဆောင်] ပန်းရောင်ခလုတ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် Nintendo ခလုတ်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်...
ထုတ်ကုန်အသစ် PS4 ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာ
1. ps-4 အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသော gamepad မော်ဒယ်အသစ်။အသစ်မွမ်းမံထားသော အသွင်အပြင်၊ စတိုင်ကျသော အရောင်လိုက်ဖက်မှုနှင့် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသည့် ခလုတ်ဒီဇိုင်းတို့သည် လိုက်ဖက်ညီစွာ လိုက်ဖက်ညီပြီး မတူညီသော ဂိမ်းလက်ကိုင်ကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ပေါ့ပါးပြီး (0.47) LB သာရှိသည်။အကြာကြီးကိုင်ထားရင် ပင်ပန်းမှာမဟုတ်ဘူး...
ဂိမ်းထိန်းချုပ်ကိရိယာခလုတ် လုပ်ဆောင်ချက် ဖော်ပြချက်
1. ဘက်ထရီအား အပြုသဘောနှင့် အနုတ်တိုင်များအလိုက် အလယ်ခေါင်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ချိတ်ဆက်ပြီးနောက်၊ လက်ကိုင်ခလုတ်သည် လင်းလာလိမ့်မည်။2. လက်ကိုင်၏ကြိုးမဲ့ usb ကို ဘောက်စ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ၎င်းကို စတင်ပါ။အကယ်၍ သင်သည် ဂိမ်းဧည့်ခန်းကဲ့သို့သော ဂိမ်းလော်ဘီနှင့် ဆင်တူသော ဂိမ်းအချို့ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
အချိန်တွေ ကုန်သွားတယ်။ပထမဆုံး controller ထွက်လာပြီး ခုနစ်နှစ်အကြာတွင် စွယ်စုံရပို၍ လူကြိုက်များသည့် controller သည် Nintendo အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင် controller ၏ မူရင်း NES controller မှ ထွက်လာပါသည်။ဤထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် အချို့သောကစားသမားများနှင့် ရင်းနှီးခြင်းမရှိပါ။လူတိုင်းလူတိုင်းတော့ ရင်းနှီးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်...
မိုဘိုင်းလ် gamepad ကို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နည်း။
မိုဘိုင်းဂိမ်းလက်ကိုင်ကို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် အဆင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- 1. မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း၏ ဘလူးတုသ် မျက်နှာပြင်ကို ဖွင့်ပါ၊ ဘလူးတုသ်ကို ဖွင့်ပါ၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသည် ရှာဖွေရေးကိရိယာ အခြေအနေကို အလိုအလျောက် ထည့်သွင်းပါမည်။မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းစနစ်သည် စက်ပစ္စည်းကို အလိုအလျောက် ရှာဖွေခြင်းမပြုပါက၊ y...